PeaceCoin စျေး - အွန်လိုင်း PEC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို PeaceCoin (PEC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ PeaceCoin (PEC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ PeaceCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ PeaceCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
PeaceCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PeaceCoinPEC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0286PeaceCoinPEC သို့ ယူရိုEUR€0.0244PeaceCoinPEC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0219PeaceCoinPEC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0263PeaceCoinPEC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.258PeaceCoinPEC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.182PeaceCoinPEC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.638PeaceCoinPEC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.107PeaceCoinPEC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0381PeaceCoinPEC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0401PeaceCoinPEC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.642PeaceCoinPEC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.221PeaceCoinPEC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.154PeaceCoinPEC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.13PeaceCoinPEC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.84PeaceCoinPEC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0393PeaceCoinPEC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0436PeaceCoinPEC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.89PeaceCoinPEC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.199PeaceCoinPEC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.05PeaceCoinPEC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩33.89PeaceCoinPEC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦11.09PeaceCoinPEC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.09PeaceCoinPEC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.792
PeaceCoinPEC သို့ BitcoinBTC0.000003 PeaceCoinPEC သို့ EthereumETH0.00008 PeaceCoinPEC သို့ LitecoinLTC0.000536 PeaceCoinPEC သို့ DigitalCashDASH0.000333 PeaceCoinPEC သို့ MoneroXMR0.000333 PeaceCoinPEC သို့ NxtNXT2.3 PeaceCoinPEC သို့ Ethereum ClassicETC0.00427 PeaceCoinPEC သို့ DogecoinDOGE8.64 PeaceCoinPEC သို့ ZCashZEC0.000369 PeaceCoinPEC သို့ BitsharesBTS1.11 PeaceCoinPEC သို့ DigiByteDGB0.946 PeaceCoinPEC သို့ RippleXRP0.103 PeaceCoinPEC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00101 PeaceCoinPEC သို့ PeerCoinPPC0.0988 PeaceCoinPEC သို့ CraigsCoinCRAIG13.34 PeaceCoinPEC သို့ BitstakeXBS1.25 PeaceCoinPEC သို့ PayCoinXPY0.511 PeaceCoinPEC သို့ ProsperCoinPRC3.67 PeaceCoinPEC သို့ YbCoinYBC0.00002 PeaceCoinPEC သို့ DarkKushDANK9.39 PeaceCoinPEC သို့ GiveCoinGIVE63.35 PeaceCoinPEC သို့ KoboCoinKOBO6.67 PeaceCoinPEC သို့ DarkTokenDT0.0263 PeaceCoinPEC သို့ CETUS CoinCETI84.46